Warreen Ameerikaa Dhimma Biyya Namaa Keessa Harka Galfatu: Ministrii Dhimma Alaa Chaayinaa
Waxabajjii 04, 2019
Ministriin dhimma alaa Yunaayitid Isteetis Maayik Poompeeyoo mormitoota barattoota Chaayinaa kanneen waggaa 30 dura waltajjii Tianan-men-tti ba’anii hiriira mormii farra mootummaa koministii ka lubbuu galaafate geggeessan galateeffachuu isaanii Chaayinaan fudhatama dhabsiiste.
Pompeeyoon kaleessa ibsa kennaniin barattoonni kun gootota lammiiwwan Chaayinaa ti jedhanii Chaayinaan caasaa addunyaatti makamtee hawaasa wal danda’uu fi daran ifaa ta’e ni qabaatti jedhanii kan abdatan ta’uu dubbatanii abdiin sun garuu ennaa ka biyya paartii tokkichaa taate Chaayinaan dhiittaa mirga namaa to’achuu dhabde dibisbisaa’e jedhan.
Poompeeyoon ennaa boqonnaa seenaa dukkanaa’aa biyyattii sana kanneen du’anii fi dhabaman mul’inatti beeksian gaafataniiru.
Ministriin dhimmi alaa Chaayinaa Geng Shuang har’a tuuta oduuf akka ibsanitti Poompeyoon caasaa siyaasa Chaayinaa akkaan haleelan jechuun qeeqan. Namoonni hangi tokko kanneen Ameerikaa keessaa waa’ee dimokraasii fi dhiittaa mirga namaa dubbachuu dhaan dhimma biyya namaa keessa harka galfatu jedhan.